Raharaha-Hunan Nanbeiwang Biolojika Teknolojia Co., Ltd.
Ny famokarana asidra ursodeoxycholic amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba fiasa biolojika fa tsy fomba simika novokarin'ity orinasa ity dia namaha ny olana momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahombiazan'ny famokarana ny mpanjifa Changde Yungang Biotechnology Co, Ltd, izay nanatsara ny famokarana vokatra sy kalitao, mihena. vidin'ny famokarana sy ny tombony azo avy amin'ny toe-karena. Nohavaozina ny tetikasa.
Ny orinasanay dia nahomby tamim-pahombiazana ny teknolojia vaovao rehetra amin'ny fitrandrahana, fanadiovana sy famonoana ny proteinina enina avy amin'ny bakteria voan'ny fototarazo, mametraka fototra ara-teknika ho an'ny synthesis ny asidra ursodeoxycholic amin'ny fomba enzimma. Toy izao manaraka izao ny fanavaozana:
1. Sambany, ny fiakan'ny andiany UD dia mihatra amin'ny dingana asidra ursodeoxycholic. Ny synt synthesis enzymatic ursodeoxycholic asidra dia synthesize simika raha oharina tamin'ilay teo aloha. Ny fomba semi-synthesis dia manana tombony amin'ny fizotra tsotra, ny fahombiazan'ny famokarana ambony ary ny fiarovana ny tontolo iainana ;;
2. Amin'ny fampiasana inducer vaovao, fantaro ny fepetra faran'izay tsara indrindra hahazoana ny vokatra anzima avo kokoa amin'ny alalàn'ny fandalinana ny fomba fiasa;
3. Ny fanangonana mivantana ny fiasan'ny bakteria ho an'ny famokarana, fanatsorana ny dingana fitrandrahana sy ny fanadiovana ny mony, ary mitahiry ny asan'ny angovo miaraka amin'ny fahombiazan'ny farany.